E-News Nepali || Fast and Accuracy » किन ढाटे रामकृष्ण ढकालले ? यस्तो छ श्रीमती निलमसंग डिभोर्सको नालिबेली
ईटहरी / गत शनिबार सोल्टी होटलमा सबैको प्रतीक्षा थियो भारतीय चर्चित गायिका आशा भोसलेको । उनलाई सुन्न कार्यक्रममा हलमा भएकाहरुको नजर एक जोडीतिर पनि तानिइनैरहेको थियो । उनी थिए–गायक रामकृष्ण ढकाल । उनी श्रीमती नीलम शाह र छोरीसँगै कार्यक्रममा थिए । कार्यक्रममा यी तीनै जना एकै लहरको सिटमा बसे । ढकाल र उनकी श्रीमतीका बीचमा छोरी रानी थिइन् ।
कार्यक्रममा आमा–छोरी खासखुस गफ गरिरहेका थिए । बीचबीचमा ढकाल पनि मिसिन्थे छोटो गफमा । झुस्स दाह्री पलाएको उनको अनुहार निन्याउरो थियो । श्रीमती र छोरीको मुहार अलि फरक देखिन्थ्यो । सञ्चारकर्मीको नजर पनि उनी माथि नै थिए । केही क्यामेरा उनी भएतिरै सोझिएका थिए । कार्यक्रममा गायिका भोसलेसँगै ढकालले पनि गीत गाउने कार्यक्रम थियो । उनले गायिका भोसलेलाई ‘आगे आगे तोपैको गोला’ अनि ‘मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले’ बोलको गीतमा साथ दिए ।
कार्यक्रम सकिएपछि ढकाल, नीलम र रानीसँगै कार्यक्रम हलबाट बाहिरिए । गाडी पार्किङ स्थलसम्म होटलको गार्डले पु-याएका थिए । मिडियाकर्मी उनको परिवारलाई पछ्याउँदै पार्किङसम्मै पुगेका थिए । गाडीका चालक सिटमा ढकाल बसे, नजिकै नीलम अनि पछाडि छोरी बसिन् र होटल सोल्टीबाट निस्किए । आखिर किन मिडियाले यसरी ढकाल परिवारलाई पछ्यायो ? कारण थियो बुधबार भाइरल भएको समाचार । समाचार गायक ढकाल र उनकी श्रीमती नीलम शाहबारे थियो ।
शाहले ढकालविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेको र सोहीअनुसार बुधबार दुवैबीच सहमतिमा छोडपत्र भएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनको पारिवारिक जीवन आमचासोको विषय बन्यो । साँच्चै हो त भन्ने शंकाका बीच ढकालले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा श्रीमती शाहसँगै रहेको मायालु तस्बिरमा लभ साइनसहित लेखे–’अरुले जे सुकै भनून् हाम्रो कसिलो सम्बन्ध कहिल्यै मर्ने छैन ।’उनको स्टाटसको आशय थियो, सम्बन्ध विच्छेदको समाचार गलत हो । उनले केही मिडियामा प्रतिक्रिया दिँदै यो हल्ला मात्र हो, आफूहरुसँगै रहेको दाबी गरेपछि थप अन्योल बढाउने नै भयो । सामाजिक सञ्जालमा ढकालका फ्यानहरुले उनकी श्रीमतीलाई गाली गर्दै लेखिरहेका थिए ।
प्रकाशित मिति २२ पुष २०७६, मंगलवार १५:५४